WhatsApp inotanga kuyedza mafirita mukutsvaga mubeta yayo | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 13/05/2022 20:00 | IPhone maapplication, Noticias
WhatsApp betas inogara ichivandudzwa. Masvondo mashoma apfuura zvakaziviswa zviri pamutemo Nharaunda, nzvimbo yekusangana yemapoka makuru umo kubatanidza nhaurirano dzose kuburikidza nemapoka akasiyana uye hurukuro dzakabatana muNharaunda idzi. WhatsApp yakatangawo zviri pamutemo maitiro mazuva mashoma apfuura. Asi chinonyanya kushamisa pane zvese izvi ndechekuti nhau dzichiri kuburitswa mubeta. Pachiitiko ichi, WhatsApp yatanga kuyedza mafirita ekutsvaga ega profiles kubva muzuva rayo Bhizinesi beta yakatovabatanidza. Tichava nemasefa aya pakati pedu rinhi?
Mafirita ekutsvaga achauya kuWhatsApp kune wese munhu
WhatsApp Bhizinesi maakaunzi akagamuchirwa nguva yapfuura masefa ekutsvaga. Ichi chishandiso chakaratidzwa pakasvika injini yekutsvaga. Masefa aya anobvumira kutsvaga dzimwe chats zvichibva pane mamwe maitiro avakasangana nawo. Pakati peaya maficha ndeaya: mapoka, asina kuverengerwa, anobatika uye asiri ekubata. Nenzira iyi tinogona kukurumidza kuwana iyo yatiri kutsvaga pakati pese chats dzatinadzo kana isu tine pfungwa yezvatinoda kuwana.
Iyo itsva beta yeWhatsApp yeIOS inosanganisira mafirita aya mukutsvaga maakaundi akajairwa, sezvakataurwa kubva WABetaInfo. Ndiko kuti, ivo vanoda kuunza mafirita kune vese vashandisi. Nekudaro, iyo ficha inounza diki shanduko shanduko inovandudza usability. Kubva paWhatsApp Bhizinesi kuti uwane mafirita zvinodikanwa kuti uwane injini yekutsvaga uye kamwe mukati mekutsvaga shandisa mafirita. Nekudaro, iyo ficha yemaakaundi akajairwa ivo vanozosanganisira mafirita kubva pachiratidziro chekumba kwatinowana zvese zvedu chats.
Ichi chiitiko chiri mukuyedza pane ese WhatsApp ye iOS, Android uye desktop. Nekudaro, kuve bvunzo uye kuwanikwa muchirongwa chebeta uyewo hatizivi kuti ichatangwa zvechokwadi here kana kuti rini. Izvo zviri pachena ndezvekuti kuzvipira kuenderera mberi nekuvandudza application nekuvandudzwa uye mabasa matsva ari kuramba achiwedzera kuve echokwadi mumeseji app.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp inotanga kuyedza mafirita mukutsvaga mubeta yayo